Tsy ny firenen-dehiibe ihany no mihorohoro amin’ny « wikiLeaks ». Navokan’ity tranokalam-pifandraisana vahiny ity fa manana ffandraisana amin’ny mpanao trafikana rongony ao Mozambika ity, ny Filoham-pirenena ankehitriny Armando Guebuza sy ny Filoham-prenena teo aloha Joaquim Chissano. Ity farany izay nitarika ny vondrona mpanelanelana iraisam-pirenena (Gic) tamin’ny krizy teto Madagasikara.
Raha ny vaovao navoakan’ny tranokala Lemonde.fr, avy amin’ny loharanom-baovao « wikiLeaks » ihany, dia mifandray tendro amin’ireo lohandohan’ny mpisorona amin’ny mpanao trafikana rongony ao Mozambika, toa an’i Mohamed Bachir sy Ghulam Rassul, iretsy olobe ra iretsy. Voalaza ho isan’ny loharanom-bolan’ny antoko politikan-dry Chissano mihitsy aza ny vola avy amin’ireo mpanao varomaizina zava-mahadomelina ireo. Fantatra fa diplaomaty amerikanina, miasa ao Mozambika, no nandefa telegrama dipalomatika namoaka ireo vaovao ireo, ary azon’ny « WikiLeaks ».